Maku qaadan karaa guriga baaritaanka HIV? – Help Center
Haddii aad galmo ahaan firfricoontahay, baaritaanka HIV oo joogta ah waa qaabka kaliya ee dhabtii lagu ogaado xaaladaada. Si kastaba, marwalba ma fududo in la heli xarun caafimaad, ama laga yaabo inaad ka walaacdid arimahaaga gaarka ah ama badbaadada oo goobta baaritaanka HIV.
Meelaha qaarkood, waa suurtogal in la helaa qalabka baaritaanka HIV ee aad ku sameyn kartid gurigaaga. Qalabka is baarida uma wanaagsan mana u saxsano sida baaritaanada HIV ee aad ka heli kartid xarunta caafimaad, laakin is baarida ayaa ka wanaagsan inaadan baarin gabi ahaanba. Haddii sabab walba aadan heleyn ama ka heli karin baaritaanka HIV dhaqtarka daryeelka caafimaad, tani waa sheyga labaad ee ugu wanaagsan.
Inta badan baaritaanada HIV ee guriga waxay qaataan inta u dhaxeyso 23 iyo 90 maalmood oo si sax loogu ogaado HIV. Inta lagu jiro waqtigaan, waa suurtogal in aan laga helin HIV laakin dhabtii qabo HIV. Waa muhiim in la baaro inta lagu jiro muddadaan iyo kadib si loo go’aansado xaaladaada HIV. Qalabyada ku jiro baakida baaritaankaaga ayaa kuu sheegayo jadwalka waqtiga halka qalajiyaha HIV laga ogaan karo. Haddii aad dareentid in uu ku gaaray HIV 72 saacadood gudahood, kala hadal dhaqtarka daryeelka caafimaad wax ku saabsan ka hortaga gaarista hore isla markaas.
Waxaa hadeer jiro labo qaabab ee loogu baaro guriga HIV. Kan ugu horeeyo waa qalabka baaritaanka halka aad isticmaashid baaritaanka lagu qaadayo muunada candhuufta oo loogu arko guriga natiijooyinka baaritaanka isla markaas. Qaabka labaad waxay ku lugleedahay qaadista muunada dhiiga ee guriga iyo u dirista sheybaar oo ka baarandaga. Building Healthy Online Communities waxay hayaan warbixin badan oo gaar ah oo ku saabsan baaritaanadaan halkaan.
Haddii natiijooyinka baaritaanka dhaho inaad qabtid HIV, la dabagalka dhaqtarka daryeelka caafimaad kaas oo ku siin karo baaritaan xasaasi si loo xaqiijiyo natiijooyinka baaritaanka guriga. Mararka qaar, baaritaanka HIV waxay bixin karaan natiijada baaritaanka qabitaanka oo been ah, marka marwalba way wanaagsantahay inuu dhaqtarka daryeelka caafimaadka ku baaro markale. Haddii ay xaqiijiyaan natiijada baaritaanka wanaagsan, dhaqtarkaaga wuxuu kugu caawin karaa bilaabida daaweynta oo kugu xiro adeegyada taageerada kale. Haddii aad heshid natiijada baaritaanka qabitaanka, hubi inaad sii wadid baaritaanka joogtada ah ee HIV si aad u ogaatid xaaladaada. Waxaad sidoo kale rabi kartaa inaad lahadashid dhaqtarka daryeelka caafimaadka wax ku saabsan bilaabida PrEP, kaniini maalinle ah ee kugu caawiyo ka hortaga HIV.
Hadeer, qalabka baaritaanka guriga waxaa si sahlan looga heli karaa Yurub iyo Mareykanka, ka ogow dooqyada qalabka baaritaanka guriga HIV ee laguu heli karo halkaan. Haddii isticmaalida qalabka baaritaanka guriga kugu habooneyn, ka raadi aagaaga kugu dhow ee baaritaanka HIV halkaan.
Ma ka qaadi karaa HIV galmada afka ah?